Somaliland: Komiishanka Qaranka Oo Cayimay Maalinta Loo Dareerayo Doorashada Madaxtooyada & Madaxweynaha Oo La Sugayo Inuu Digreeto Ku Ansixiyo - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Komiishanka Qaranka Oo Cayimay Maalinta Loo Dareerayo Doorashada Madaxtooyada & Madaxweynaha...
Doorashada Madaxtooyada waxa lagu beegay Maalinta u dambaysa Muddo-kordhintii Golaha Guurtidu u sameeyay Madaxweynaha Iyo Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland
Guddiga Doorashooyinka Qaranka Somaliland, ayaa Shalay ku dhawaaqay inay Madaxweynaha u gudbinayaan Xilliga ay u cayimeen in Doorashada Madaxtooyadu Dalka ka dhacdo.
Guddoomiyaha Komiishanka Doorashooyinka Qaranka Eng. Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo Shalay ka hadlayey Munaasibad uu Lacagta Doorashada lagu qabanayo kagala wareegayey Xukuumadda, ayaa sheegay inay gudbinayaan Maalinta ay Doorashada dalka ka dhacays, taasi oo Macnaheedu yahay in Madaxweynuhuna uu Digreeto ku soo saaro oo uu ansixiyo.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Maanta oo Sabti ah oo bishuna tahay 10 (Shalay) waxaanu Gudbinaynaa Warqaddii Cayimaadda Maalinta Doorashadu dhacayso, Maalintaasi oo ah 13-ka bisha November, 2017-ka, oo maalin Isniin ah ku beegan, maalintaas ayaa Doorashada loo dareeri doonaa haddii Alle yidhaahdo.”
13-ka bisha November, ee Sannadkan 2017-ka waa Maalinta ugu dambaysa ee ay ku eg-tahay Muddo kordhintii Golaha Guurtidu u sameeyay Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland.
Doorashada Madaxtooyada Somaliland
Komishanaka Doorashooyinka Qaranka